Yugyan Daily » नेकपाकै नेताहरूले कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिमलाई गम्भीर ढंगले नलिएको गुनासो :प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
मान्छे उचाल्ने मान्छे भड्काउने
नेकपाकै नेताहरूले कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिमलाई गम्भीर ढंगले नलिएको गुनासो :प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुला सीमाना र विदेशबाट मान्छे आउने क्रम नरोकिँदासम्म संक्रमणको अवस्था भयावह नै रहने चेतावनीसमेत दिए
उनले भने, ‘केही मानिस, केही माध्यम र केही संस्थाहरूमा अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपन देखिन्छ। यथार्थमा भन्दा अन्त बुझ्न गइरहन पर्दैन मेरै पार्टीमा देखिन्छ। सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन भनेकोको छ। तर मेरै पार्टीमा ४५० को केन्द्रीय कमिटी तुरून्त चाहियो भनेर भनिरहेका छन्। कहाँ बस्ने हो ? के गर्ने हो ? त्यस्तो सोच केही पनि छैन। तर बैठकचाहिँ चाहियो भन्ने कुरा त मेरै पार्टीमा छ। स्थायी कमिटी अहिले नै बस्नुपर्‍यो, भरे बस्नुपर्‍यो। त्यसबाहेक केही छैन। यो देश र जनताप्रतिको गम्भीर उदासिनता, लापरबाही, बेवास्ता गर्ने प्रवृति र आफ्ना स्वार्थका पछाडि कुद्ने प्रवृति निकै व्यापक रूपमा देखिन्छ।’
‘प्रहरीलाई किन संक्रमण भएको छ भन्दा उनीहरू सडकमा गएका छन्, संक्रमित मान्छेसँग उनीहरू डिल गर्नु परेको छ। अनेक काममा उनीहरू छन्। त्यस्ता कामबाट उनीहरू संक्रमित भइराखेका छन्। ड्युटीको क्रममा संक्रमित भइरखेका छन्। रेस्क्यू गर्न जाँदा संक्रमित भएर आएका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘अहिलेको पानी परेको छ, बाढी आएको छ। सरकारले बाढी गएको पहिरो गएको ठाउँमा तत्काल जोखिमका साथ रेस्क्यू टिम पठाएको छ। अरूले पनि सहयोग गरेका छन्। तर बौद्धिक जगतको टिप्पणीहरु सुन्छु-कहाँ छ सरकार ? काठमाडौंमा बसेर टेलिभिजनको पर्दा अगाडि क्यामरा अगाडि बसेर कहाँ छ सरकारभन्दा कता देखाउने ? त्यो रेस्क्यू गएको ठाउँमा हेर्नुपर्‍यो सरकार छ कि छैन्। त्यहाँका जनतालाई सोध्नुपर्‍यो सरकार छ कि छैन्। सरकारले जहिले पनि तदारूकताका साथ ज्यान जोखिममा राखेर सरकारी मान्छे ? त्यहाँ खटेका छन रेस्क्यु गरेको छ। राहत पुर्‍याएका छन्।’